Qisa Cajiib ah oo ku dayasho Mudan | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Qisa Cajiib ah oo ku dayasho Mudan
Cumar binu khidaab Rc,wuxuu diray ciidan si ay oola dagaalamaan reer Ruum , waxaa ciidankaas Ku jiray wiil dhalin yaro ah oo asxaabtii rasuulka scw ka mid ahaa, magaciisuna ahaa C/laahi binu xadaafa Rc. waxaa dheeraaday dagaalkii u dhexeeyey muslimiinta iyo gaalada , waxay layaabeen madaxdii reer ruum qalbi adayga muslimiinta iyo say u rabaan mowdka
Boqorkii reer ruum ( qaysarkoodii), wuxuu amray in loo keeno mid ka mid ah maxaabiista muslimiinta…. Waxaa loo keenay c/laahi binu xadaafa ayagoo jiidaya gacmaha iyo luguhu isku xiranyihiin, waxaa la sheekaysta boqorkii reer ruum …. Markaasuu layaabay fahmadiisa iyo caqligiisa , markaas buu Ku yiri: maad gaaloobin aan Ku siidaayee ? wuxuu yiri c/laahi maya mayeelayo.
wuxuu yiri boqorkii war gaalow oo aan mulkigayga barkiis Ku siiyee . suu yiri : laygama yaabo. boqorkii baa misana yiri: war dhamaan wixii aan mulki leeyahay qaado oo diintaada ka bax , si aad dilka ooga badbaadi. Wuxuu yiri : c/laahi walaahi hadii aad isiisi mulkigaaga iyo kii aabayaashaa iyo kii carab iyo cajami in aan diintayda ilbiriqsi aanan ka tagayn.!
boqorkii wuu carooday wuxuuna yiri: hadaba waan Ku dilin ! suu yiri: idil hadaad rabti .
boqorkii wuxuu amray in tiirka toogashada lagu xiro oo falaaraha iyo warmaha lagu gano oo hareerihiisa lagu dhufto si loo cabsi galiyo. boqorkuna wuxuu intaas u soo bandhigayaa kiristaanimada asaguna wuu diidayaa oo mowdka ayuu sugin.
Markii uu Boqorkii arkay mayal adaygiisa wuu yiri : xabsiga geeya biyo iyo cunto midna yaan lasiin, waana loodiiday ilaa uu Ku sigtay inuu u dhinto oon iyo gaajo.
markaasaa waxaa lookeenay hilib doofaar iyo khamro, ,,c/laahi markuu arkay buu yiri : walaahay waan ogahay in aan ahay nin gaajo darani hayso cuntadaasna dhibta ihaysa daraadeed diintaydu way ii ogashahay in aan cuno, balse ma doonayo in gaaladu igu Farxaan , mana uusan cunin .
boqorkii baa loo sheegay arintaas ,boqrokii wuxuu yiri cunto wanaagsan iyo gabar qurix badan haloo geeyo , gabadhii qurixda badnay waxaa la amray in ay faaxisho u soo bandhigto.
c/laahi haweentii maba fiirin xageeda ….. Markii ay aragtay arinta ninkaan oo aan danba kalahayn way carootay wayna ka soo baxday ayadoo xanaaqsan, oo leh waxaad ii gayseen nin aan kala ogayn qof iyo dhagax mid aan ahayba.
Markii uu ka quustay boqorkii wuxuu amray digsi daamur ah oo karaya in lookeeno, hadiiba hortiisa baa lakeenay , markaasaa waxaa la keenay maxaabiistii kale ee muslimiinta laga soo qabtay, c/laahi oo arkaya baa maxaabiistii digsigii daamurka iyo saliida ahaa lagu riday.
Hadiiba lafahoodii oo cad baa Ku soo haray digsigii, markaas baa boqorkii soo fiiriyey c/laahi oo yiri : maad gaaloobin suu yiri laygama yaabo,!! saa boqorkiibaa aad u xanaaqay wuxuuna yiri : Ku tuura digsiga , markii ay jiideen oo uu dabkii Ku sii dhawaa ayuu ooyey oo ilmeeyey, saa boqorkii baa farxay , oo yiri hadaba gaalow waxna waan kusiin waana Ku siidayn, yuu yiri: Maya saad mooday maahan. suu yiri hadaba maxaa la ooyday ? Suu yiri waxaan la ooyey waxaan leeyahay Hal naf oo hal mar dhimanaysa waxaan jeclaaday tintayda oo naf ah in aan yeesho mid waliba mar iga baxdo Alle dartii anoo u dhimanaya sidaan oo kale , lkn sidaan Waa hal dhimasho.
Boqorkii markii uu ka quustay buu yiri madaxayga dhunko aan iska kaa siidaayee, Suu yiri hadii aad maxaabiista muslimka oo dhan siidaynayso waan yeelin. suu yiri Haye waan siidayn hadii aad i dhunkati , markaasuu dhunkaday . dhamaan maxaabiistiina waa loo siidaayey .
madiina ayuu soo galay isagoo maxaabiis badan hugaaminaya . aad baana loo soo dhaweeyey .
Markaas baa Cumar binu khadaab yiri: qof walba oo msulim waxaa wajib Ku ah in uu c/laahi binu xafaada madixiisa dhunkado anaa uugu horeeya kuna bilaabin , wuuna dhunkaday .
Hadii aad dhamaysi nabiga Ku salin scw, Lana wadaag walaalahaa .
Previous articleGolaha Bad baadinta Qaraka oo kalaqeyb galka shirka Xalane ku xiray Sharuudo
Next articleTani waa mid kamid ah dhibaatooyiinka kajira Dalka ee Niger.
Turjumaannadii ay ciidamada Britain uga soo Tageen Afghanistan oo...